Ukuphupha ngokudada Discover ➡️ Discover Online ▷ ▷️
Amaphupha apho singabhabha ngequbuliso esibhakabhakeni aqhelekile. Umntu unokulinganisa kuphela ubuchule bezilwanyana kunye neentaka ngoncedo lwezixhobo zobuchwephesha. Nokuba ukwazi ukubhabha ngokwakho yinto ehlala ingenakufikeleleka kuthi. Mhlawumbi eso sesona sizathu sokuba abantu abaninzi bafune obu buchule kunye nenkqubo yokulangazelela ukubhabha emaphupheni abo. Kule meko, nangona kunjalo, ayisoloko iyimeko yokuba sincwina emoyeni ngendlela elawulwayo.
Ngamanye amaxesha sidada nje, mhlawumbi ngaphezulu komhlaba, okanye asikwazi ukulawula isantya okanye icala lethu. Amaphupha anjalo anentsingiselo yawo kwaye akufuneki alinganiswe namaphupha okubhabha.
Kodwa ulutolika njani uphawu lwephupha elithi "float"?
1 Uphawu lwephupha «ukudada» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukudada» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukudada» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukudada» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwiimeko ezininzi, ukuntywila ephupheni kubonakalisa kakuhle ikamva. Kukholelwa ngokubanzi ukuba umntu ochaphazelekayo Imiqobo Unokoyisa kwaye ke ufezekise iinjongo zakho ebomini.
Oku kuyinyani ngakumbi kumaphupha apho ukudada kubonwa njengokuthandekayo. Ukuba umntu ubhabha phezu komhlaba, utoliko ikakhulu lubandakanya izithintelo ezincinci amaphupha afika kwindlela yobomi bemihla ngemihla kwaye banako ukuqonda ngaphandle komzamo omkhulu.
Iphupha elidadayo kwicala elingenakuphenjelelwa ikwangumqondiso wokuba umntu ekuthethwa ngaye uziva nje ukukhutshwa. Kule meko, usebenza kancinci ukuya kwinjongo ethile kwinqanaba langoku lobomi. Endaweni yoko, vumela izinto zenzeke kwaye ulinde ukubona ukuba zikusa phi. Oku kuhamba neemvakalelo ezinzulu. Ukuphumla kunye nokuchacha.
Nangona kunjalo, umphuphi kufuneka alumke kwixesha elide ukuba angalawulwa kakhulu ziziganeko nangabanye abantu. Kufika indawo apho kufuneka ulawule ubomi bakho, wenze isigqibo.
Uphawu lwephupha «ukudada» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, uphawu "float" luphawu lokulangazelela Libertad. Iqela elinomdla lifuna ubomi obuzimeleyo, ngaphandle kwemida, uxinzelelo kwaye ngaphandle kwamagunya. Ukuba uyadada kwimeko ethile yamaphupha ngaphandle kokuba ube nefuthe okanye ulawule ulwalathiso, oku kubonisa ukuba ukhona iinkqubo ezingekho zingqondweni iyavula. Zazi kwakhona kule nqanaba.
Uninzi lwee-psychoanalysts zikwaqonda nokudada ephupheni njengento ekhethekileyo. Isimboli sesondo. Kule meko, ukudada kufanekisela inkululeko ekudala ilangazelelwa kunye nomnqweno wokuzaliseka.
Uphawu lwephupha «ukudada» - ukutolika kokomoya
Kwiphupha lokomoya, ukudada kubonisa enye Amava Kwenziwa ngaphandle komzimba, oko kukuthi, kwinqanaba lokomoya.